Ny safidy tsara indrindra 9 amin'ny VideoScribe | Androidsis
VideoScribe dia programa rindrambaiko fampihetsiketsehana fotsy fotsy noforonin'i Sparkol, izay ahafahan'ny olona tsy manam-pahalalana momba ny sarimiaina mamorona sary mihetsika fotsy, ary koa ny horonan-tsary manazava matihanina ho an'ny faritra rehetra.
Miaraka amin'ny sary mihetsika noforonina mialoha sy sary, dia afaka manolotra hevitra sarotra amin'ny fomba mazava sy tsotra ary be maso isika. VideoScribe dia fampiharana tsara ho an'ireo tanjona ireo fa tsy ny tsara indrindra amin'ireo rehetra misy eny an-tsena, na dia io aza no malaza indrindra. Raha te hahafantatra ny inona ianao safidy tsara indrindra amin'ny VideoScribe, Manasa anao aho hamaky hatrany.
VideoScribe dia manana fetra maromaro izay tsy manao azy ho fampiharana tsara indrindra amin'ny karazany:
Horonan-tsary mihetsika fotsy ihany no azo atao.
Horonantsary fotsy ihany no azo atao. Na dia mety ho an'ny sasany aza ity dia mety tsy izany no fitaovana tsara indrindra hampielezana ny hafatrao.
Voaloa ary arakaraka ny drafitra ilaintsika, ny sarany isam-bolana dia afaka mivoaka amin'ny tarehy sy ny ampahany amin'ny voa.
2 Azo vakiana (Web)
4 Explaindio (tranonkala)
5 Crazytalk Animator 3 (tranonkala)
6 Animaker (Web)
9 PowToon (tranonkala)
Ny ankamaroan'ny modely misy ao Doodly Izy ireo dia horonan-tsary misy fotsifotsy, fa mamela anao hamorona modely horonam-panaka an-tsary na horonantsary fotsy. Ny tabilao fitaratra dia modely iray izay ny soratra dia miseho amin'ny ilan'ny rindrina fitaratra fa tsy manerana ny faritra fisaka, toa ny rafitra sosona.
Doodly dia manolotra antsika famakiam-boky be dia be izay misy audio, raki-tsary, kojakoja ... Ny ankamaroan'ny singa azo ovaina sy ovaina mba hampifanarahana azy amin'izay ilaintsika. Ity fampiharana ity dia tsara amin'ny famoronana horonan-tsary miendrika doodle nefa tsy mandany vola amin'ny fampiharana lafo kokoa toa ny VideoScribe.
Ny dingan'ny fanovana miaraka amin'i Doodly dia tsotra ihany, afaka manamboatra horonan-tsary mora foana ianao Dingana tsotra 3:
Omeo anarana ny tetikasanao ary avy eo mifidy modely te hampiasa izahay.
Ny dingana faharoa dia misy mamorona horonan-tsary miaraka amina endri-tsoratra 10 ka hatramin'ny XNUMX, Pose 100 sy kojakoja samihafa 200. Io dia ahafahantsika misafidy ny vahaolana ka hatramin'ny tahan'ny endriny.
Ny dingana farany dia aondraho ny horonan-tsary amin'ny endrika tadiavinay avy amin'ny karazany maro atolotry ny fampiharana anay.
Azo vakiana (Web)
Ny tanjon'ny Bitable dia ny fanaovana ny famoronana horonantsary ho tsotra ary azon'ny rehetra ampiasaina tsy misy olana, tsy misintona ny rindranasa satria amin'ny alàlan'ny tranonkala ihany no iasany, noho izany dia mifanaraka amin'ny rafitra fiasa rehetra. Manolotra antsika a maodely marobe amin'ny Internet hanampy anay hamorona horonantsary miaraka amina fampianarana maro be.
Raha vantany vao nifidy ny modely ilaintsika isika dia tsy maintsy misafidy ny fomba mahaliana antsika indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny safidy samihafa atolotray antsika. Ho fanampin'izany, mamela antsika hampiasa izy io teti-doko mifototra amin'ny lohahevitra tsy misy dikany, na dia afaka mamorona ny fombantsika manokana mifanaraka amin'ny sary mihetsika aza isika
Ny dingana farany dia misafidy audio ho an'ny horonan-tsary. Amin'io lafiny io, Biteable dia mametraka feo be dia be amintsika mba hahitana ilay tadiavintsika amin'ny fotoana rehetra.
Ireo horonantsary rehetra noforoninay, rehefa manondrana azy ireo, asio mari-drano. Raha te-hanafoana azy isika dia mila mandoa famandrihana izay manana vidiny 99 dolara isan-taona ary manome antsika fidirana amin'ny fitaovana fanampiny koa.
Ny safidin'ny fandoavam-bola dia mamela anay misintona ny horonantsary amin'ny ekipanay ihany koa. Ny ankamaroan'ny modely dia natao hametahana seho izay maharitra 5 segondra. Ny atiny amin'ireto seho ireto dia azo ovaina, toy ny faharetany, ny endri-tsoratra ampiasaina ary koa ny habeny.
Ny endri-javatra mahaliana indrindra an'ny Easy Sketch Pro dia hoe manolotra sary sy feon-kira manara-penitra 12.000 mahery, sary masina namboarina tanteraka sy ny fahafaha-mamorona rohy ao anaty horonan-tsary amin'ireo horonan-tsary hafa ary koa rohy mankamin'ny pejy web, ao anatin'izany ireo tamba-jotra sosialy lehibe.
Easy Sketch Pro dia mitovy amin'ny Doodly. Manolotra endrika mamelombelona, ​​ary koa a fandaharana fanombohana tena azo idirana miaraka amina safidy maro an'isa. Ny sary sy ny fanitsiana ny fizotry ny fotoana dia hahafahantsika manararaotra tsara an'ity sy ireo fampiharana feno kokoa rehefa tsy mahomby izany.
Sketch mora manana maro fampidirana plug-in izay mamela antsika, ohatra, hampiditra valiny mailaka mandeha ho azy, bokotra fiantsoana, fifanakalozana haino aman-jery sosialy ... ankoatry ny hafa.
Ny vidin'ity programa ity dia 97 dolara monja amin'ny fandoavam-bola tokana amin'ny kinova feno indrindra. Raha tsy te handoa be isika dia afaka misafidy ny drafitra fototra azo alaina amin'ny $ 37.
Con Explaindio afaka mamorona sary mihetsika fotsy sy Horonan-tsary mihetsika 2D na 3D. Izy io dia mifanaraka amin'ny endrika sary marobe, sary izay azontsika ampiana amin'ny zavaboarintsika. Ny interface dia tsy misongadina indrindra amin'ny maha-tsotra azy, zavatra lozika raha jerena fa tsy dingana tsotra ny fanentanana.
Na izany aza, ny fanokanana fotoana kely ho azy dia azontsika atao ny mihazona izany ary manararaotra azy tsara satria mamela antsika io ampanjifaina hatramin'ny farany ambony ny zavatra noforoninay. Amin'ny maha-tranonkala fa tsy fampiharana dia azontsika ampiasaina amin'ny rafitra fiasa rehetra. Vantany vao namorona ilay horonantsary isika dia afaka manondrana ny atiny anaty rakitra video hizarana na hampiakarantsika amin'ireo sehatra hafa.
Explaindio dia iray amin'ireo safidy mora vidy indrindra amin'ny VideoScribe, izay mety indrindra ho an'ireo izay manao ny dingana voalohany amin'ny karazana sarimiaina. Nefa na izany aza, tsy manana ny ankamaroan'ny fitaovana matihanina Inona no antenaina amin'ny horonan-tsary mifantoka amin'ny vokatra ara-barotra na fampisehoana.
Crazytalk Animator 3 (tranonkala)
Azontsika lazaina izany raha hampiasaina Crazytalk Animator ny mamorona sarimiaina dia toy ny mifehy saribakoly nomerika. Io dia mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny rantsam-batana sy ny endrika tarehin'ny toetra amam-panahy tsirairay avy mba hitondra singa iray amin'ny fiainana ary hahafahany manamboatra ny hetsika rehetra.
Ity rindranasa ity dia mifantoka amin'ireo mpampiasa rehetra maniry raiso ny dingana voalohany amin'ny sarimiaina. Ny fampiharana dia ahafahantsika manova ny fihetsiky ny endri-tsoratra ary koa ny fihetsika ataon'izy ireo amin'ny fomba tena tsotra.
Io dia ahafahantsika manafatra sary izay notehirizinay tao amin'ny fitaovanay, anisan'izany ireo hita ao Photoshop endrika, hampiasaina amin'ny sarin'ireo tarehin-tsoratra ary amin'izany dia miasa amin'ny fomba fiteny sy fihetsehana.
Ny endri-tsoratra 2D dia afaka mihetsika mora foana amin'ny habaka 3D, manolotra fahatsapana dynamism izay tsy dia hitantsika loatra amin'ny fampiharana hafa amin'ity karazana ity.
Raha tsy tianao ny hevitra momba mametraka rindrambaiko amin'ny solosainao, mety te handinika fomba hafa ianao Animaker, satria miasa amin'ny rafitra fiasa amin'ny alàlan'ny browser rehetra. Mila misoratra anarana fotsiny isika, mamorona kaonty ary avy eo misafidy ny fomba video tadiavinao.
Mba hamoronana ny horonantsary misy antsika dia mila fotsiny sintomina ary alatsaho eo amin'ny fizotrany ny entana mameno ny banga amin'ireo singa ao amin'ny tranomboky izay atolotra antsika.
Manolotra antsika i Animaker a tutorial be dia be Izay no hamaha ny fanontaniana rehetra mety hitranga mandritra ny fampiasantsika azy, hatramin'ny voalohany dia mety ho somary sarotra ihany izany.
Ny tombony lehibe, araka ny nolazaiko tetsy ambony, izay omen'i Animaker antsika dia izay azontsika atao manomboka mamorona votoaty haingana tsy mila miahiahy momba ny mifanentana na fametrahana rindrambaiko.
VideoMakerFX dia iray amin'ireo fampiharana vitsy ato amin'ity lisitra ity izay dia tsy mitaky fandoavana an-dolara isam-bolana Raha afaka mampiasa azy dia tsy misy mari-drano na karazana fetra hafa. Misy fomba maro hamoronana horonantsary avo lenta amin'ny alàlan'ny horonan-tsary amin'ny fomba ahoana, typografia kinetika ary fampisehoana fomba fotsy.
Ny fampiharana dia vidin'ny $ 37, vidiny ahafahantsika miditra fitaovana iray hamoronana sary mihetsika sy horonantsary manazava na inona na inona karazany. Ny mpampiasa interface dia tena mora ampiasaina, noho izany dia afaka mihazona azy io haingana isika, miaraka amin'ny tsipika fianarana mihena tokoa izay ahafahantsika mifantoka amin'ny famoronana horonan-tsary.
Vyond, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Goanimate, dia natao ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra, na dia azo ampiasaina betsaka amin'ny karazana orinasa aza izy io mba hamoronana fampisehoana vokatra. Miasa amin'ny alàlan'ny browser, noho izany dia mifanaraka amin'ny rafitra miasa rehetra eny an-tsena.
Mametraka eo am-pelatanantsika a sary mihetsika sy fampisehoana an-tserasera marobe, Ka ny famoronana fampisehoana, horonan-tsary na fanazavana dia dingana haingana sy mora vantany vao lasa zatra ny mpampiasa interface tsara izahay, interface tsotra kely nefa mety amin'ny famoronana sarimiaina tsara.
PowToon dia ary mbola hitohy amin'ny ho avy, iray amin'ireo fitaovana fitantarana tantara an-tserasera tsara indrindra. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny foibem-pianarana misy eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra, ary koa ny mamorona infografika mihetsika sy karazana sarimiaina rehetra.
Io serivisy io dia apetraka amintsika a maro ny vokany fanentanana amin'ny alàlan'ny lisitra midina, mba hizahanay toetra haingana ny asany. Izy io koa dia ahitana maodely maimaim-poana marobe izay azontsika ampiasaina hamoronana fampisehoana ao anatin'ny segondra vitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Top 9 safidy hafa amin'ny VideoScribe
Samsung Galaxy Z Flip 3 tanteraka: Famolavolana azo hatsaraina, fanoherana ny rano, fampisehoana 120Hz, ary maro hafa